Miteraka horohoro ny fakana an-keriny sy ny vono olona any Ogandà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Jona 2018 5:39 GMT
Pikantsary tao amin'ny YouTube avy amin'ny NTV Ogandà momba ny tantaran'ny fakàna an-keriny sy ny famonoana an'i Susan Magara.
Tamin'ny volana Febroary 2018, hita tany amin'ny làlana maloto iray ny fatin'i Susan Magara, 28 taona, 21 andro taorian'ny nakan'ny andian-jiolahy azy an-keriny raha teny an-dalana hody ho any Kampala izy, araka ny tatitra avy amin'ny gazety Ogandey .
Nisarika ny sain'ny gazety Ogandey ny fakàna an-keriny an'i Susan sy ny famonoana tamin'ny farany ary nahatonga ny fanomezan-toky avy amin'ny tompon'andraikitry ny governemanta fa hanadihady ny raharahany izy ireo ary hitondra ny jiolahy ho amin'ny fitsarana ary hiaro ireo Ogandey amin'ny mpaka an-keriny amin'ny hoavy.
Na izany aza, telo volana taty aoriana, Brinah Nalule, 22 taona, tovovavy iray hafa mpianatry ny kolejy ao Kampala no nalain'ny jiolahy an-keriny, novonoina ary natsipin'izy ireo tany anaty lobolobo ny fatiny ary voalaza fa mody nanao mpamily fiarakaretsaka izy ireo.
Nielanelana telo volana no nitrangan'ireo voina fakana an-keriny roa tao Kampala ireo, saingy samy nampiahiahy ny antsipiriany momba ny tantarany ka nampihorokoditra ny firenena tao anatin'ny telo volana farany.
Efa mahazatra ho an'ireo mpaka an-keriny ny mangataka vola ho takalon'aina. Saingy tamin'ireto tranga roa ireto dia nangatahana vola be ny fianakavian'ireo niharam-boina ka vaky fo izy ireo satria tsy nanana fahafahana ny handoavana izany mba hamonjena ny havan-tiany.
Nangatahana vola mitentina 1 tapitrisa $ ny fianakavian'i Susan, ka ny 189.000 dolara ihany no hitan'ny fianakaviana ary nanome izany ho an'ireo mpaka an-keriny izy ireo taorian'ny nanapahan'ireo mpaka an-keriny ny rantsantànan'i Susan roa ary nalefany tany amin'ny fianakaviany.
Nangatahana vola takalon'aina mitentina 3.000 dolara ny ray aman-drenin'i Brina kanefa tsy nanana izany ireo ray aman-dreny. Na dia efa novonoin'ireo mpaka an-keriny aza i Brinah ary nalevina dia mbola nangataka ny fianakaviana hanonitra ihany noho ny vola laniny tamin'ny nanaovany ny fakàna an-keriny sy ny famonoana ny zanak'izy ireo vavy.
Manomboka mirongatra ny fakana an-keriny tany Ogandà noho ny hantsan'ny manaitra misy eo amin'ny mpanankarena sy ny mahantra.
Olona dimy amby roapolo raha kely indrindra no nalaina an-keriny nandritra ny telo volana farany, raha oharina tamin'ireo fakana an-keriny miisa 48 voatatitra teo anelanelan'ny taona 2015 sy ny volana Janoary 2018, araka ny tatitry ny polisy .
Mitombo ny tahan'ny trangana fakàna an-keriny any Oganda ary tena mampitebiteby !
Nanaitra ny olom-pirenena ny valinteny avy amin'ny governemanta
Nanosika ny governemanta Ogandey hanome baiko ny orinasam-pifandraisandavitra rehetra mba hanoratana ny karatra SIM vaovao rehetra ny firongatry ny fakana an-keriny sy ny famonoan'olona ary mba hampifandray ny angona any amin'ny Foibe Nasionaly miandraikitra ny Angona Biometrika izay tantanan'ny NIRA Oganda satria maro amin'ireo mpandika lalàna no miantehitra amin'ny karatra SIM tsy voasoratra anarana mba hifandraisana hoy izy ireo.
Filazana tao amin'ny media sosialy avy amin'ny MTN uganda izay milaza ny fandraràna ny fivarotana ny karatra SIM. Sary avy amin'ny Pejy Facebook MTN Uganda .
Nangataka ny orinasam-pifandraisandavitra ihany koa ny governemanta mba hampiato ny fivarotana karatra fahana kikisana mba hanamorana kokoa ny fanadihadiana amin'ny tranga toy izany.
Nilaza ny Fikambanana Mpiaro ny Mpanjifa ao Oganda raha niresaka tamin'ny gazety fa tsy hampihena ny tahan'ny heloka bevava ny fampiatoana ny fivarotana karatra SIM sy ny karatra fahana kikisana.
Tsy ny varotra fahana no olana satria mora any Oganda amin'izao fotoana izao ny mividy fahana, noho izany mila mampiasa fepetra hafa mba hamahana ny tsy fahombiazany ny UCC.
Mila miantehitra amin'ny fahana nomerika ankehitriny ny mpanjifa noho ny fandraràna ireo karatra kikisana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny finday Money mba ahafahan'izy ireo mividy ny fahana amin'ny kaontin'ny findainy sy ny fahazoana fahana haingana sy tsotra (Easy Load) izay handehanan'izy ireo eny amin'ny fivarotana fahana ary ny mpivarotra no mamahana ny findainy.
Imbetsaka ny polisy no namoaka ny antso an-tariby izay noraketina tao amin'ny finday mba ho ren'ny daholobe mba hamantarana ireo feo saingy tsy mbola nahazoam-bokatra izany.
Na izany aza, tsy nanakana ireo mpaka an-keriny ireo ezaka rehetra ireo satria mbola miantehitra amin'ny findain'ireo niharam-boina izy ireo ka manasarotra ny polisy ny fisamborana azy ireo.
Tompokovavy Brinah Nalule izay nalaina an-keriny tao amin'ny fiantsonan'ny taksy. Sary tao amin'ny media sosialy.
Nihevitra i Bernard Tabaire, mpanao gazety zokiolona sady mpanazatra, ​fa mila ezaka mafy ny fampandehanana ny rafitra napetraka.
Ny Ogandey (sy ireo tsy Ogandey satria nisy ihany koa vao haingana ny fahafatesan'ireo teratany Finlandey sy Soedoà tao amin'ny efitranon'ny hotely mihaja indrindra nisy azy ireo tao Kampala) no mandoa ny lafo indrindra noho ny fikorontanankevitra, lasa ratsy kokoa noho ny kolikoly sy ny fitiavam-bola tafahoatra. Nanome vahana ny fakana an-keriny, ny fifanarahana hamonoana olona ary ny fandrobana avo lenta indrindra ny kavuyo ao amin'ny faribolan'ny fiarovana (izay na dia ny Filoha aza dia nilaza fa misy jiolahy tafiditra ao anatin'ny tafiky ny polisy). Ary mety ho lasa nofiratsin'ny firenena ny voina ahilikilika, ary hampiseho ny endriky ny hoavy.
Mihevitra ny olona sasany fa mety vao mainka hanaratsy ny toe-draharaha ny fampiasan'ny manampahefana ireo fiara tsotra sy ireo polisy izay manao akanjo sivily mba hisamborana ny olona iray manao heloka bevava. Hoy ny mpisera Twitter, Amanya Timothy hoe:
Anisan'ny tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny fakana an-keriny sy ny famonoan'olona ao anatin'ny vatosoa fahinin'i Afrika ny fampiasana mitohy ny “fakàna an-keriny” ho toy ny fomba fisamborana ao Oganda.
Nilaza ny Dr. Kizza Besigye, kandidà filoham-pirenena teo aloha sady mpitarika ny mpanohitra fa tsy hitsahatra ny fakàna an-keriny raha tsy miova ny mpitondra ny firenena. Nisioka tantara iray avy amin'ny The Nile Post izy izay miresaka momba ireo polisy naka an-keriny ny lehilahy iray ary nangataka vola takalon'aina tamin'ny vadiny.
Ny fitomboan'ny herisetra famonoana olona, ny fakàna an-keriny ary ny tsy fandriampahalemana amin'ny ankapobeny ao Oganda dia mifandrohy akaiky amin'ireo sampandraharahan'ny fiarovana! Izany no mahatonga azy io vao mainka hiharatsy hatrany raha tsy miova tanteraka ny rafitra manontolo
Navoakan'i NTV Uganda ny tantara iray izay niresahan'izy ireo tamin'ny manam-pahaizana momba ny fandriampahalemana sy ny polisy mba hahatakarana izay mandrisika ny fakàna an-keriny sy ny famonoana olona ao Oganda.